Dog World Admin | | အထွေထွေခွေးများ
ခွေးများနှင့်ကြောင်များဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ပွားခြင်းသည်မြို့ပြဒဏ္isာရီတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူများဖြစ်လျှင်အိမ်၌ကြောင်များနှင့်ခွေးများအမြဲတမ်းရှိနေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသဟဇာတအတူတကွကြောင်းနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်.
မျိုးစိတ်နှစ်ခုအကြားတိုက်ပွဲများကိုရှောင်ရှားရန်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သည် သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးစားပြီးလေးစားပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကြောင်များသည်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုရှိပြီးတစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သည်။ ခွေးများသည်ပိုမိုပေါင်းသင်းခြင်း၊ တက်ကြွခြင်း၊
ပိုကောင်းတယ် တိရစ္ဆာန်များငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကအတူတကွနေထိုင်ရန်နေသားတကျတစ်နည်းပြောရရင်တော့သူတို့ငယ်ရွယ်စဉ်မှာခွေးနဲ့ကြောင်ကိုအိမ်ကိုခေါ်လာပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မိတ်ဆက်ပေးတာထက်ပိုကောင်းတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသူအိမ်တော်ဘုရင်ကိုယုံကြည်လို့ပါ။ ထို့အပြင်အိမ်တွင်တစ် ဦး စီအနေဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်သောအထီးကျန်အချိန်များအတွက်အစားအစာtheရိယာကိုသီးခြားထားရှိရန်နှင့်သူတို့၏အနားယူရာနေရာနှင့်သီးခြားထားသင့်သည်။
အ တိုက်ပွဲတွေ ကြောင်နှင့်ခွေးအကြား နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ခွေးသည်များသောအားဖြင့်ကြောင်ထက်ပိုကြီးပြီးခွန်အားပိုသည်။ ထို့ကြောင့်သူကအဆုတ်နှင့်ထိမိလျှင်၎င်း၊ နှုတ်ဖြင့်ဖမ်းမိလျှင်၎င်းသည်နာကျင်စေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်မျက်နှာနှင့်ခြစ်လျှင်၊ ဒါကြောင့်မျက်စိရောက်ရှိ။
အားလပ်ချိန်မှာစမ်းကြည့်ပါ သင်တို့နှစ် ဦး လုံးပါ ၀ င်သည့်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန်အထူးသဖြင့်သေးငယ်တဲ့အချိန်မှာမနာလိုမှုမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားပြီးသူတို့အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရဖို့ကြိုးစားပါ။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏အဆင့်အတန်းနှင့်အခန်းကဏ္ and များနှင့်ကောင်းမွန်သောစံနမူနာကောင်းများမည်သို့တည်ရှိနေသည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးနှင့်ကြောင်များအကြားတည်ငြိမ်စွာအတူတကွအောင်မြင်ရန်
လွန်ခဲ့တဲ့ 2023 အနှစ်
မင်္ဂလာပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့မင်းကိုမင်းကိုဖိုရမ်မှာချီးကျူးချင်ပါတယ်၊ အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်ပြtoနာအနည်းငယ်ရှိပေမယ့်အရာအားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ခွေးသည် (၅ နှစ်ခန့်အရွယ်) သည်အခြားတိရိစ္ဆာန်များ၊ ငှက်များနှင့်ကြွက်များ၊ ပြproblemနာကလွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြောင်တစ်ကောင်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိပြီး ၇ လခန့်လိုအရာတစ်ခုရလိမ့်မည်။ သူကအရမ်းချစ်ခင်တွယ်တာပြီးအပျော်ကစားတဲ့ကြောင်ပါ။ ငါသူတို့ကိုတစ်နေကုန်သီးခြားခွဲထားရမယ်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အကျွမ်းတဝင်ရှိနိုင်မယ့်နည်းလမ်းရှိလား။
သူတို့ကိုငါအတူတကွထားရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ငါခွေးကိုကိုင်လိုက်တဲ့အခါသူမကသူမကိုမနာကျင်စေချင်ပေမယ့်သူမအနံ့လိုချင်တဲ့ခွေးတွေလိုပဲကြောင်တက်လာပြီးသူမရဲ့မျက်နှာကိုပွတ်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်မကြောက်တော့ဘူး။ သူမရုတ်တရက်ရွေ့လျားသွားတဲ့အချိန်မှာကြောင်ကမထင်မှတ်ဘဲခြစ်လိုက်တယ်။ ငါမျက်နှာဒါမှမဟုတ်မျက်စိထဲမှာကုတ်ခြစ်ခံရဖို့ကြောက်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါမလွှတ်လျှင်, ငါသူတို့ကိုအဘယ်သို့ငါရနိုင်မည်နည်း ငါနှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ရှုရန်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချောင်ချည်နှောင်ထားမယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိလိမ့်မလား။ ကြောင်သည်ခွေးကိုခြစ်မိလျှင်သူမကြောက်ပြီးသူ့ကိုဖြတ်သန်းသွားမှာလား။
ကောင်းပြီငါနည်းနည်းလေးကူညီပေးပါလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် !!! ^^
Nerea Romero Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာကြောင်တစ်ကောင်ရှိပြီ။ အခုဆိုရင်ငါဟာ ၂ လအရွယ်ရှိချီဟွာဟွာကိုယူလာပြီးကြောင်ရဲ့တုန့်ပြန်မှုကငါ့ကိုလေးစားမှုအနည်းငယ်ပေးတယ်။ သူကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ သူကတစ်နေ့လုံးဆိုဖာနောက်ကွယ်မှာပုန်းနေခဲ့တာပါ။ ကြောင်ကခွေးကိုတစ်ခုခုလုပ်ပေးမှာကိုကြောက်တယ်။ ငါ့ရဲ့တိရိစ္ဆာန်ဆရာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးသူကကြောင်ဘယ်မှာအိပ်နေတယ်လို့ပြောတယ် ခွေးရဲ့စောင်ကိုထည့်ရန်အနံ့နှင့်ပေါင်းသင်းလိမ့်မည်ငါကြိုးစားခဲ့သော်၎င်းအနံ့ဆိုးထွက်သွားသည့်အခါတွင်လည်းအလားတူတုံ့ပြန်မှုရှိသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုအကြံဥာဏ်အချို့ပေးနိုင်ပြီး၎င်းသည်ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
Nerea Romero Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ခွေးသည် ၅ နှစ်ဖြစ်ပြီးကြောင် ၂ ကသူတို့ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့အတူယှဉ်တွဲတည်ရှိနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသလား။ ခွေးဟာလူမှုရေးအရ၊ ကြောင်မှာသူဘယ်တော့မှမငိုခဲ့ပါ၊
alessandra velasquez ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လကကျွန်တော့်မှာခွေးတစ်ကောင်၊ ဒါကြောင့်လပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါငါကျား ၂ ကောင်မွေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ညီမတွေကကြောင်တွေကိုပိုပြီးဂရုစိုက်တဲ့အတွက်အခုငါ့ရဲ့ခွေးဟာမနာလိုဖြစ်နေတယ်။ ငါသူတို့ကိုတစ်ကိုယ်တည်းထားခဲ့မှာကိုကြောက်လို့ငါ့ခွေးနဲ့အတူဘယ်လိုပေါင်းစပ်ပြီးငါခွေးကိုဘယ်လိုပေါင်းသင်းရမယ်ဆိုတာသိချင်တယ်။ ဒီတော့ကိုယ့်ခွေးတွေနဲ့အတူငါနဲ့ငါ့ခွေးကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာသိချင်တယ် ????????????? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
alessandra velasquez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ကျွန်ုပ်မှာအောက်ပါပြproblemနာရှိနေပြီးအကူအညီများစွာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ၌အလွန်ချစ်ခင်သောသူ Labrador retrievers (Candy နှင့် Sabrina) နှစ်ခုရှိသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်အရွယ်ရောက်ပြီးကြောင် (Terry) နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ကြသည်။ ပြproblemနာကကျွန်တော့်အမေသည်အလွန် စိုးရိမ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်၌မွေးဖွားခဲ့သောကြောင်သုံးကောင် (Tobi, Gigi နှင့် Timy) ကိုမွေးမြူခဲ့သည်။ သို့သော်သူမသည် Candy, Sabrina နှင့် Terry တို့နှင့်အတူတကွပူးပေါင်းခွင့်မပြုပါ။ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်း။ ၄ င်းတို့အားလုံးသည်တိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ပြီးလေးနက်သောတိုက်ခိုက်မှုမရှိသေးသည့်အထိချစ်ခင်ကြင်နာစွာဖြင့်ကြီးပြင်းခဲ့ကြသော်လည်းနှစ်ဖက်လုံးအကြားတိုက်ခိုက်မှုရှိလိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်၎င်းတို့အားအတူတကွစုစည်း။ မရပါ။
ဘာလုပ်ဖို့ငါ့ကိုအကြံပေးပါလဲ အတူတူထားဖို့အကြံဥာဏ်တွေတောင်းတိုင်းငါအမေအရမ်းကြောက်တယ်၊ သူတို့ကတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး နာကျင်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာငါတို့ကသူတို့ကိုခွဲထားဖို့မလိုချင်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တွင်ခွေးနှစ်ကောင်ရှိသည်၊ ၅ နှစ်သမီးတစ်ယောက်နှင့်အခြား ၃ ဦး သည်အမေနှင့်သမီးများဖြစ်ကြသည်။ မကြာသေးမီကလွန်ခဲ့သော ၃ ရက်ခန့်ကသူတို့သည်ငါ့ကိုကလေးနှစ်ကောင်ပေးခဲ့သည်၊ ယခုသူတို့သည်ခြံထဲတွင်သီးခြားစီနေထိုင်ကြပြီးမကြာမီအခြားနေရာတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်၊ အပြင်မှာအတူတူနေရအောင်ငါတို့အတူတကွထားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးကိုက်တွေကိုက်ကိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာမနာလိုမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပေမယ့်သူတို့ဘယ်လိုကောင်းကောင်းရနိုင်မလဲဆိုတာပြောပြပါ။ ဒါဟာအလွန်အရေးကြီးပြီးအလွန်လိုအပ်သည်။ ¡¡¡¡¡
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာအသက် ၆ နှစ်ရှိပြီး၊ ကြောင်တွေကိုအမြဲမုန်းတီးတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ကြောင်တစ်ကောင်ကိုမွေးစားချင်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှယုံလို့ရမလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ဖြေရှင်းနိုင်မလား ???
မင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်က ၆ mss လောက်ရှိသည့်ကြောင်တစ်ကောင်ကိုမွေးစားခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ခွေးများရှိပြီး (koki၊ ၁၃ နှစ်နှင့်သေးငယ်သော၊ Lera၊ ၂ နှစ်နှင့်အရွယ်ကြီးမားသော) ခွေးများကြောင်များနှင့်အတူရှိခဲ့ကြသော်လည်းကြောင်မရှိသူများ သူတို့ကသူမကိုသယ်ဆောင်လာတဲ့သူမယူခဲ့ဘူး၊ ကီလိုမီတာကကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ Koki ကိုတွေ့တာနဲ့လက်သည်းသံချေးတက်ပြီးပြီ ... သူတို့ကိုဘယ်လိုစုစည်းရမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ငါကအခြေအနေကိုကျော်လွှားနေတယ်၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် (ကျွန်ုပ်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူသားနဲ့) ၅.၂ နှစ်အရွယ်ပါရှန်းလေးတစ်ကောင်ရှိပြီးလွတ်လပ်ပြီးငြိမ်းချမ်းသာသာကျွန်တော်တို့ကိုသူနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူနေဖို့ယူလာဖို့နှစ်လ (၂) လသားခွေးကလေးကိုပေးလိုက်တယ်။ ငါတို့စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်၊ ​​ငါတို့ကြောင် Matilda ကိုပြောပြီးပြီ။ ငါသူမလက်သည်းတွေကိုဖြတ်လိုက်တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ ၃ နှစ်အရွယ် Chihuaha ရှိပြီးကြောင်တစ်ကောင်ယူလာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုအတူတကွစုစည်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ။ ငါ့ခွေးသည်အခြားတိရိစ္ဆာန်များနှင့်မည်သည့်အခါကမျှမနေထိုင်ခဲ့၊ pelianfi ကိုအခြားကြောင်များနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ မင်္ဂလာပါ